နောင်လာမယ့် စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းအသစ်ကလဲ စတင်နေပါပြီ!
ထပ်ပြောပါမယ်, FBS၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီ ပရိုမိုးရှင်းကို လစဉ်ကျင်းပပေးနေပါတယ်. အိပ်မက်များတကယ်ဖြစ်လာပြီ သြဂုတ်လပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး FBSက ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အခွင့်ကောင်းကို ရယူလိုက်ပါ!
အဓိကကတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေက ဆန်းသစ်မှုရှိဖို့ပါပဲ - ကမ္ဘာလောကကြီးက ပျော်ရွှင်စရာတွေ အံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုတကယ် ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာကိုသာ ဆန္ဒပြုတောင်းဆိုလိုက်ပါ.
ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကလည်း အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်များစွာကလဲ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအပ်မက်ထဲက ဆုလက်ဆောင်တွေကို ရရှိခဲ့ကြပြီးပြီလဲ ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့တွေထဲက:
ထိုင်းနိုင်ငံမှ Oraya Toaeအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကတော့ မုန့်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မိသားစုအတွက် ၀င်ငွေရှာပြီး အဲ့ဒီငွေနဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံး ၀ယ်ပေးချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
အင်ဒိုနီးရှားမှ Wildan Mochammad ကတော့ သူ့သားသမီးလေးတွေပျော်ရွှင်သွားစေဖို့အတွက် အရုပ်လေးတွေလိုချင်ပါတယ်လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကျော်ခိုင်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ဘဝမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဝင်ပြိုင်ဖူးတာဖြစ်ပြီး ကံကောင်းစေတဲ့ FBS ရွှေစင် ဒင်္ဂါပြားတစ်ပြားကို ဆုလက်ဆောင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
သင်၏ personal areaရှိ ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာကို သွားရောက်ပါ။
ပုံတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး သင်၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာနှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
FBSတရားဝင် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာရှိ မူလပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းအရာပါပို့စ်ကို လင့်ခ်အတိုင်းသွားပါ။
ထိုပို့စ်အောက်ရှိ ကွန်းမန့်တွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ရေးပေးလိုက်ပါ။